Nagu Saabsan | Hormuud Telecom Foundation
Hormuud Telecom Foundation, waa hey’ad aan faa,iido doon aheyn oo aay maalgelineeyso Shirkadda Isgaarsiinta ee Hormuud. Mu,asasadu waxaa aay siineeysaa kaalmo dadka iyo heyadaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya howlaha horumarinta bulshada.
Muasasada Hormuud Telecom, waxaa aay kaalmeeyneeysaa mashruucyada , iyo dedaalada wax looga qabanayo dhibaatooyinka bulshada. Gaar ahaan waxaa aay xooga saari doontaa , xaga Waxbarashada, Caafimaadka, shaqo abuurista, Xirfad barida, Xoojinta Dhaqaalaha, Wax ka qabashada bii,ada, iyo arimaha xaga dhaqanka iyo sportiga.
Sidoo kale Mu,asasadu waxaa aay gacan ka geysan doontaa wax ka qabashada xaga gargaarka bani aadanimo, iyo masiibooyinka.
Ujeedooyinka ama Hadafka Mu,asasada Hormuud.
Hey’adda waxaa ay dhiiri gelin doontaa waxbarashada, iyada oo kafaaliqaadi doonta iskuulada, iyo shaqsiyaadka aan awoodin ineey iska bixiyaan kharashaka waxbarashadaa
Hey’adda waxa aaya baabuli doontaa ama qabanqaabin doontaa tababaro xirfadeed, si kor loogu qaado furask ashaqo helista ee qeybaha bulshada ee shaqola,aanta ah
Hey,adda waxa aay sameyn doontaa barnaamijyo loogu abuurayo shaqo dadka xoogsatada ah ee ka shaqeysta suuqyada, ee aan heysan dhaqaale aay shaqadooda kusii wataan.
Mu,asasadu waxaa aay tiigsaneeysaa sidii aay Soomaaliya u noqon laheyd, meel nolol wanaagsan ka jirto, dadka noloshoodana uu ku dhaco isbedel wanaagsan xaga horumarka.
Qaabdhismeedka Mu,asasada Hormuud.
Mu,asada Hormuud waxaa hogaamin doona koox aqoonyahno khibrad u leh howlaha bulshada, oo masuul ka noqon doona ineey maamulaan howlaha Mu,asasad. Waxaa hogaamin doona maamulka maamule kaas isna hoos tagi doona Golaha sare ee Mu,asasad.
Golaha sare ee mu,asasadu waxaa aay ka kooban yhiin, ama isugu jiraan xubno ka kal imaan doona Shirkadda Isgaarsiinta ee Hormuud, ganacsato, aqoonyahano, bulshada rayidka ah iyo Culumada.
Mu,asasada Hormuud, waxaa aay aaminsan tahay, in aay tahay wax laga soo gudbay xiligii aay shirkaduhu ku deeqi jireen waxoogaa yar oo lacag markii la gaaro xisaabxirka sanadki. Waxaanu dooneeynaa in maalgelinta bulshadeed ee aan saameyneeyno aay ahaato mid socota sanadka oo dhan, aanuna kula falgalno bulshadeena. Waxaan jecelnahay in waxa aan gelineeyno bulshada aay noqdaan kuwo ku sameeya isbedel joogto oo wanaagsan noosha bulshada, sidoo kale waxaan dooneeynaa in shaqaalaha Shirkadda isgaarsiinta Hormuud aay si firfircoon uga qeyb qaataan dedaalkaa isagaah.
Waxaan si iskaashi ah ula shaqeyn doonaa ururada bulshada ee ka shaqeeya howlaha bulshada, iyo hey,adaha aan dowliga aheyn, iyo cid kastaa oo ka shaqeeyneeysa howlaha aan ka shaqeeyneeyno kuwa la midka ah, isla markasna aan ka horimaaneeynin ujeedooyinka iyo ahdaafta mu,asasad.
Mu,asasada Hormuud, waxaa aay howlaheeda sal uga dhigi doontaa istiraatiijiyada ah.
In aan siiyo taageero joogto ah , howlaha Caafimaadka, waxbarashada, iyo biyaha
In aan siino taageero joogto sidii wax fiican looga qaban lahaa xaga hagaajinta bii,ada iyo nadaafada.
In gacan siino xoojinta xaga dhaqaalaha dalka
In gacan deg deg ah ka geysto howlaha gargaarka deg dega ah ee ka dhasha masiibooyinka.
In aan sameeyno furas aay shaqaalaha Hormuud Telecom, uga qeyb qaadan karaan howlaha lagu kaalmeeynayo bulshada Soomaaliyeed.
In aan saameyn fiican ku yeelano, in lasii hormariyo howlaha xaga arimaha horumarinta bulshada ee aay wado Hormuud Telecom.
Goobaha aan ka shaqeyn doono.
Mu,asasad Hormuud, waxaa aay ka shaqeyn doontaa ama howlaheeda ku balaarin doontaa dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya. Waxaana aay ku dedaali doontaa ineey taageerto mashruucayada abuuri kara saameyn wanaagsan oo waarta, oo aay ka faa,iideystaan jiilka soo koraya.